Laba nin oo Shabaab ka tirsan oo lagu qabtay Baydhabo | Baydhabo Online
Laba nin oo Shabaab ka tirsan oo lagu qabtay Baydhabo
Militants of al Shabaab train with weapons on a street in the outskirts of Mogadishu, November 4, 2008. The violence in Somalia has killed nearly 10,000 civilians since the start of 2007 and forced more than a million from their homes, triggering a humanitarian crisis that aid workers say is one of the worst — and most neglected — in Africa. REUTERS/Feisal Omar (SOMALIA)
Laba ka mid ah maleeshiyada Ururka Al Shabaab, ayaa saqdii dhexe ee caawa lagu qabtay Magaalada Baydhabo ee Gobolka Baay, xilli ay qorsheynayeen in ay dilaan askari ka tirsan Ciidamada Booliska Koonfur Galbeed.
Raggan, ayaa waxaa lagu qabtay xaafadda Suuqa Xoolaha, gaar ahaan Isgoyska Cunaaye, ka dib markii uu iska caabiyay askarigii ay doonayeen inay dilaan. Askariga ayaa dhaawacay mid ka mid ah Shabaabka.
Sarkaal Booliska Baydhabo ka tirsan, ayaa sheegay in gurmad gaaray ninka askariga ay suurta-geliyeen in gacanta lagu soo dhigo xubnaha ka tirsan mintidiinta Al Shabaab.
Sarkaalkan oo magaciisa ka gaabsaday, ayaa yiri “Nabadiidkan waxay rabeen inay dilaan askari Ciidamada Booliska ka tirsan oo maraayay Isgoyska Cunaaye, ujeedkoodu wuxuu ahaa inay qoriga ka qaataan, laakiin is rasaasayn ayaa meesha ku dhex martay. Gurmad deg deg ah oo Ciidamada Booliska iyo Nabad Suggida ka tirsan ayaa meesha tagey, waxayna gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah labadaasi nin isagoo dhaawac ah, markiiba wuxuu sheegay ninkii kale ee la socday, sidaasi ayaana lagu soo qabtay.”
Isagoo la hadlaayay Dhacdo.com, ayuu yiri “Labadan nin waxaa lala soo qabtay laba bistoolad iyo bambooyin ay wateen. Nimankan waa nimankii argagixisada u qaabilsanaa dilalka iyo qaraxyada ee Magaalada Baydhabo.”
Wuxuu intaa ku daray in mid ka mid ah ragga la soo qabtay uu sanad ka hor isa soo dhiibay, isagoo markaasi iska dhigaaya in uu ka soo baxsaday maleeshiyada Al Shabaab.
“Mid ka mid ah nimankan oo lagu magacaabo Kuusow Xasan, hal sano ka hor ayuu isa soo dhiibay, wuxuu markaasi sheegay inuu ka soo goystay Al Shabaab, xerada dhaqancelinta ayuu soo maray, lacag ayuuna ka qaatay, laakiin shaqadiisa si hoose ayuu u watay.” Sidaasi waxaa yiri Sarkaalka Booliska Baydhabo ka tirsan.